Manchester United oo qiimo sare ku baadi goobeysa saxiixa xidiga u dhashay dalka Talyaaniga Marco Verratti. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Manchester United oo qiimo sare ku baadi goobeysa saxiixa xidiga u dhashay dalka Talyaaniga Marco Verratti.
Manchester United oo qiimo sare ku baadi goobeysa saxiixa xidiga u dhashay dalka Talyaaniga Marco Verratti.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 12-06-16 11:21 AM Manchester United ayaa lasoo tabinayaa iney wado qorshe ay kusoo qaadaneyso ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Paris Saint-Germain Marco Verratti.
Macalinka kooxda shayaadiinta cas cas Jose Mourinho ayaa wado qorshe uu suuqa ku gelinayo 100 Milyan oo Euro waxa uu doonayaa in 78 kamid ah lacagtaas uu ku dalbado jowharkan yar ee u dhashay dalka Talyaaniga sida lagu xusay wargeyska Corriere dello Sport.
Marco ayaa ku biiray kooxda PSG sanadkii 2012 ka isaga oo kasoo dhaqaaqay kooxda Pescara, waxaana xusid mudan in xidigan uu ku seegi doonaa koobka Euro 2016 ka dhaawac.
Waxaa xusid mudan in 23 jirkan uu kasoo muuqday 15 jeer kaliya xulka dalka Talyaaniga, waxa uuna u dhaliyey kaliya hal gool 15 kaas kulan.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in kooxda Manchester United ay sidoo kale xiiso ba’an u qabto saxiixa weeraryahanka u dhashay dalka Sweden horeyna ugu soo ciyaaray kooxda PSG Zlatan Ibrahimovic, wallow wararka saakay soo baxay ay sheegayaan in ku biirista Zlatan ee Man United dib u dhac ku imaan doono maadaama uu kaga qeyb galayo Sweden ka koobka Olympic da.